stonesoflife: Computer Graphics and Applications (B.E. IT)
Computer Graphics and Applications (B.E. IT)
file ကို ဒေါင်းပြီးကြည့်ရင်တော့ပုံတွေပါမြင်ရမယ်။
ဒါကတော့ B.E. IT မှာသင်ကြားရမယ့် Computer Graphics and Applications ပါ။ မှားတာရှိရင်ပြောပြပေးပါ။ လိုတာရှိလည်းဖြည့်စွက် ပေးပေါ့။ လိုတာတော့ရှိမှာအမှန်ဘဲ။
Monochrome image ဆိုတာ color တမျိုးထဲပါတဲ့ image မျိုးကိုပြောတာ။ အဲဒီလ်ို image မျိုးကို function တစ်ခုအနေနဲ့ ပြောမယ်ဆိုရင် f(x,y) ပေါ့။ ဒီနေရမှာ x တို့ y တို့ဆိုတာက coordinate တွေကိုပြောတာပါ။ ဥပမာ f(10,15)=100 ဆိုပါတော့။ ဆိုလိုတာက x = 10, y = 15 မှာရှိနေတဲ့ point ရဲ့ brightness သို့မဟုတ် gray level ဟာ 100 ရှိတယ်လို့ပြောတာပါ။0ဆိုရင် အဲဒီနေရာလေးမှာအမဲရောင်ပေါ့။ 255 ဆိုရင်တော့ အဲဒီနေရာလေးမှာ အဖြူရောင်ပေါ့။0နဲ့ 255 ကြား တန်ဘိုးတစ်ခုခုဆိုရင်တော့ အမဲနဲ့အဖြူကြားကတစ်ခုခုပေါ့။ မှတ်ထားရမှာက value နည်းရင် dark ဖြစ်ပြီး များရင် light ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက light intensity နည်းရင်မှောင်တာပေါ့။ များရင်တော့ light ဖြစ်တာပေါ့။
Digital image ဆိုတာ discretize လုပ်ထားတဲ့ image မျိုးကိုပြောတာ။ ဥပမာ ပြောရရင် digital device တွေဖြစ်တဲ့ကွန်ပျူတာတို့၊ ဖုန်းတို့၊ memory stick တို့အစရှိတဲ့နေရာတွေမှာ သိမ်းထားတဲ့ image တွေကို digital image လို့ခေါ်တာပေါ့။ ဖလင်ပေါ်မှာ၊ photo paper ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ပုံတွေကတော့ discretize လုပ်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက် digital image လို့မခေါ်နိုင်ပါဘူး။ digital image တစ်ခုကို two dimensional matrix တစ်ခုလို့မြင်ကြည့်ပါ။ အဲဒီ matrix ထဲမှာပါတဲ့ element တွေကိုညွန်းဘို့ဆို row number တွေ column number တွေနဲ့ညွန်းရပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့ element တွေက တော့ အဲဒီ ပုံမှာ ရှိနေတဲ့ gray level value တွေပါဘဲ။ အဲဒီ element တွေကို image element, picture element, pixel element, pixel or peal လိုခေါ်ပါတယ်။ pixel လို့အခေါ်များပါတယ်။ pixel ဆိုတာ picture element ရဲ့ရှေ့၂လုံးစီကိုတွဲခေါ်လိုက်တာပါဘဲ။ ဒါဆိုနားလည်ထားရမှာက digital image တစ်ခုကို pixel တွေနဲ့ဖွဲစည်းထားပြီး pixel ဆိုတာ light intensity ကိုပြောတာပါ။
Digital image တစ်ခုရဲ့ size တွေ gray level တွေကိုသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာ2ရဲ့ integer power နဲ့သတ်မှတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ TV image တစ်ခုရဲ့ size က 512 x 512 ဆိုပါတော့။ ဒီ image ဟာ row ပေါင်း 512 ခုရှိပြီး column ပေါင်း 512 ခုရှိတယ်ပေါ့။ ဒါဆို pixel ပေါင်း 512 x 512 = 262144 ရှိတာပေါ့။ image တစ်ခုရဲ့ size ကိုပြောတဲ့အခါ အဲဒီ image မှာပါတဲ့ pixel အရေအတွက်နဲ့ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် pixel အရေအတွက်ကို တိုက်ရိုက်မပြောဘဲ row x column နဲ့ပြောပါတယ်။ ဒီလိုသတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာလည်း ခုနကပြောခဲ့သလို2ရဲ့ integer power နဲ့သတ်မှတ်လေ့ရှိပါတယ်။ (128 x 128) or (256 x 128) အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ gray level ကိုလည်း 128, 256 အစရှိသဖြင့်2ရဲ့ integer power နဲ့ဘဲပြောပါတယ်။
Element of digital image processing system
Image တစ်ခုကို digital computer ထဲမှာသိမ်းဘို့ဆိုရင် ကွန်ပျူတာက နားလည်တဲ့ numerical ပုံစံပြောင်းပေးရပါတယ်။ အဲဒါကို digitization လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ ပြောင်းပေးတဲ့ကောင်ကိုတော့ digitizer လို့ခေါ်တာပေါ့။ အသုံးများတဲ့ digitizer တွေကတော့ microdensitometer, flying spot scanner, image dissector နဲ့ TV camera digitizers တွေပါ။ microdensitometer တို့ flying spot scanner တွေနဲ့ digitize လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီ image ဟာ transparency (ဥပမာ- negative film) or photograph ပုံစံနဲ့ရှိနေရပါမယ်။ image dissector နဲ့ TV camera တွေကတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးရှိနေတဲ့ image တွေသာမက natural image တွေကိုပါ digitize လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီ image တွေမှာ detector ကို excite ဖြစ်စေနိုင်လောက်တဲ့ light intensity တော့ရှိရမှာပေါ့။
Microdensitometer ကိုသုံးပြီး digitize လုပ်မယ်ဆို transparency or photograph ပုံစံနဲ့ရှိနေတဲ့ image ကို flat bed ပေါ်မှာတင် သို့မဟုတ် drum မှာ ပတ်ထားရပါတယ်။ ပြီးရင် အဲဒီ image ကို scan လုပ်ပါတယ်။ လုပ်တဲ့ ပုံစံကတော့ အဲဒီ image ပေါ်ကို အလင်းတန်းတွေကျရောက်စေတာပါ။ ပြီးရင် bed ကို translate လုပ်မယ်၊ drum ဆိုရင်လည်း rotate လုပ်မယ်။ လှည့်မယ်ဆိုပါတော့။ transparency image မျိုးဆိုရင် အလင်းတန်းတွေက film ကိုဖောက်သွားမယ်။ photograph ဆိုရင်တော့ image ရဲ့ surface ပေါ်အလင်းကျရောက်ပြီးအဲဒီကနေအလင်းပြန်လာမှာပေါ့။ ပြီးရင် အဲဒီ beam (အလင်းတန်း)တွေက photo detector ဆီရောက်မယ်။ ရောက်လာတဲ့ beam ရဲ့ light intensity တွေကို record လုပ်လိုက်တာပါဘဲ။ digital image ဆိုတာ intensity ရဲ့ discrete value တွေကိုသာယူပါတယ်။ microdensitometer ဆိုတာ နှေးကွေးတဲ့ device မျိုးပါ။ ဒါပေမယ့် position တိကျမှုအရှိဆုံး device ပါဘဲ။ mechanical translation နည်းနဲ့လုပ်တာမို့ နှေးတာပါ။ position တော့တိကျတာပေါ့။
Flying spot scanner ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကလည်း photodetector ကိုလာထိတဲ့ bean တွေကိုဘဲ focus လုပ်သွားတာပါ။ Microdensitometer ကတော့ image ကို bed ပေါ်တင်ထားပြီး bed ကို translate လုပ်တာတို့ drum မှာပတ်ထားပြီး drum ကို rotate လုပ်တာတို့ရှိပါတယ်။ Flying spot scanner ကတော့ image ကိုမရွှေ့ဘဲအသေထားပါတယ်။ light source က CRT ပေါ့။ ဒီမှာတော့ beam တွေရဲ့ movement ဟာ electronically သွားတာမို့ scanning speed ကမြန်ပါတယ်။
Image dissector နဲ့ TV camera တွေမှာတော့ image ကို photosensitive tube မှာတိုက်ရိုက် focus လုပ်ပါတယ်။ ဒီ tube မှာ ရိုက်ခတ်လာတဲ့ light pattern အရ output ထုတ်ပေးပါတယ်။ Dissector ကတော့ electronic emission နည်းကိုသုံးပါတယ်။ General purpose TV image digitizer တွေကတော့ vidicon tube ကိုသုံးပါတယ်။ photoconductivity ကို အခြေခံပြီးအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
Standard vidicon digitizer တွေက အခြား system တွေနဲ့စာရင် တိကျမှုပိုင်းမှာအားနည်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ အားသာချက်တွေတော့ရှိတယ်။ digitize လုပ်နေတဲ့ image ကို TV monitor ပေါ်မှာမြင်နေနိုင်ပါတယ်။
Image processing အတွက်အသုံးပြုတဲ့ system တွေကတော့ range အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ special purpose application တွေအတွက်အသုံးပြုတဲ့ microprocessor device တွေရှိသလို high resolution image တွေကို ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ larger computer system တွေလည်းရှိပါတယ်။
လူသုံးများတဲ့ storage media ၂ခုကတော့ magnetic tape နဲ့ disk pack ပါ။ (ခုတော့သိတဲ့အတိုင်း SD card တွေရော ဘာတွေရော အစုံရှိနေပါပြီ။ ခုဟာကတော့ စာအုပ်ထဲပါတဲ့အတိုင်းပြောရတာပါ။) ဒီ device တွေဟာ device တစ်ခုမှာ image ပေါင်းမြောက်များစွာကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ထိသိမ်းနိုင်လည်းဆိုတာ ကတော့ အဲဒီ device တွေ့ရဲ့ size နဲ့ သိမ်းမယ့် image တွေရဲ့ size ပေါ်မူတည်တာပေါ့။ သာမန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ အမြဲတမ်းအတွက်သိမ်းထားဘို့ဆိုရင် magnetic tape တွေကိုအသုံးပြုပါတယ်။ process လုပ်နေစဉ်ကာလအတွင်းမှာ image data တွေကို computer memory နဲ့ bulk storage media (hard disk ဆိုပါတော့) ကြား transfer လုပ်ရာမှာ မြန်ဆန်စေဘို့အတွက်ကတော့ disk ပေါ်မှာ သိမ်းပါတယ်။
Image processing လုပ်မယ့် computer sytem တစ်လုံးမှာ ဆိုရင် 32000 ကနေ 64000 word ထိရှိတဲ့ core memory ပါ minicomputer ရယ် disk device ၂ခုရယ် magnetic tape ရယ် အခြား peripheral တွေဖြစ်တဲ့ scope terminal, cassette recorder, line printer သို့မဟုတ် အခြား hard-copy output device တွေရှိဘို့လိုပါတယ်။ (ဒါလည်းစာအုပ်ထဲပါတဲ့အတိုင်းပြောတာ။ ခုတော့ နဲနဲအပြောင်းအလဲရှိတာပေါ့။)
Image processing system တစ်ခုမှာပါတဲ့ display unit ရဲ့တာဝန်က computer ထဲမှာ store လုပ်ထားတဲ့ numerical form ကနေ လူတွေမြင်နိုင်တဲ့ ပုံစံဖြစ်အာင်ပြောင်းပေးရတာပါ။ ဥပမာ အဖြူရောင် pixel တစ်ခုနဲ့ အမဲရောင် pixel တစ်ခုပါတဲ့ image တစ်ခုဆိုပါတော့။ ကွန်ပျူတာထဲသိမ်းထားတဲ့အခါမှာ0နဲ့ 255 ဆိုပြီးသိမ်းထားမှာပါ။ ဒါကိုကွန်ပျူတာကနားလည်ပေမယ့် လူကိုဒီအတိုင်းထုတ်ပြလို့ မရပါဘူး။ ထုတ်ပြလိုက်ရင် လူက0နဲ့ 255 ဆိုတာကိုဘဲမြင်ပြီး ဘယ်လို interpret လုပ်ရမယ်မှန်းသိမှာမဟုတ်ဘူး။ လူနားလည်တဲ့ အဖြူရောင်နဲ့ အမဲရောင်ဖြစ်သွားအောင် display unit ကလုပ်ပေးရတာပါ။ display unit တွေကတော့ CRT တို့ TV system တို့ printing device တို့ပါဘဲ။
ဒီ chapter ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ စာဖတ်သူတွေကို image concepts တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဘို့ပါ။ ဒီစာအုပ်မှာ သုံးမယ့် notation ကိုလည်းပြောသွားမှာပေါ့။ ပထမ section ကတော့ human visual system ရဲ့ mechanics ကို အကျဉ်းချုပ်ပြောမှာပါ။ မျက်လုံးထဲမှာ ပုံတစ်ခု ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာမျိုးပေါ့။ ပြီးတော့ brightness adaptation ရယ် discrimination ရယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး လူ့မျက်လုံးကဘယ်လိုစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့။ Section 2.2 မှာတော့ image model အကြောင်းပြောပါမယ်။ uniform image sampling နဲ့ gray-level quantization အကြောင်းကိုတော့ Section 2.3 မှာပြောပါမယ်။ Section 2.4 မှာတော့ nonuniform sampling နဲ့ quantization အကြောင်းပြောပါမယ်။ နောက်ဆုံး section ဖြစ်တဲ့ Section 2.5 မှာတော့ photographic film နဲ့ သူ့ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ characteristic တွေကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
2.1 Element of Visual Perception
Human eye ရဲ့ horizontal cross section (ဘေးတိုက်မြင်ရတဲ့အနေအထား) ကို Figure 2.1 မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ မျက်လုံးကတော့ သိတဲ့အတိုင်း လုံးလုံးကြီးပေါ့။ သူ့ရဲ့ diameter က 20 mm လောက်ရှိတယ်။ သူ့ကို အလွှာ ၃ခုနဲ့ဖုံးထားတယ်။ အဲဒီအလွှာ ၃ခုကတော့ (၁) cornea and sclera outer cover (၂) choroid (၃) retina တို့ပေါ့။ ပုံမှာလည်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။
cornea ဆိုတာကတော့ အလင်းဖောက်ထွင်းနိုင်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပေါ့။ မျက်လုံးရဲ့အတွင်းမျက်နှာပြင်ကိုဖုံးအုပ်ပေးထားတာပါ။ sclera ဆိုတာကတော့ Greek ဘာသာ skleros ကလာတာပါ။ မာကျောတယ်ဆိုတဲ့အဓိပါယ်ပေါ့။ လူ့မျက်လုံးမှာဆိုရင် sclera ကအဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ မာမမာတော့မသိဘူး။ သူကအလင်းမဖြတ်နိုင်တဲ့ membrane တစ်ခုပေါ့။ optic globe ရဲ့ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဖုံးအုပ်ထားတယ်။ သူက cornea နဲ့တစ်ဆက်ထဲပါ။ cornea ကတော့ အလင်းဖြတ်နိုင်တယ်လို့ခုနပြောပြီးပြီ။
choroid ကတော့ sclera ရဲ့အောက်တည့်တည့်မှာရှိတယ်။ သူ့မှာသွေးကြောမျှင်တွေရှိပြီး မျက်လုံးအတွက်လိုအပ်တဲ့ nutrition တွေထောက်ပံ့ပေးနေတာပါ။ သူက pigmented ဖြစ်တယ်။ ဆိုလိုတာက အလင်းတွေရဲ့အရောင်ကိုပြောင်းပစ်နိုင်တယ်ပေါ့။ ဒါကြောင့် မျက်လုံးထဲဝင်လာတဲ့ extraneous light တွေရဲ့ပမာဏ နဲ့ optical globe အတွင်းက backscatter ကိုလျှော့ချပေးနိုင်တယ်။ backscatter ဆိုတာကတော့ အလင်းပြန်တာကိုပြောတယ်လို့မှတ်သားမိတာဘဲ။ မျက်လုံးရဲ့အတွင်းအကျဆုံးအပိုင်းမှာ ဆိုရင် choroid ကို ၂ပိုင်းခွဲထားတယ်။ ciliary body နဲ့ iris diaphragm ပေါ့။ မျက်လုံးထဲဝင်လာတဲ့ အလင်းရဲ့ပမာဏကိုထိန်းချုပ်ဘို့အတွက် iris diaphragm ကလုပ်ပေးရတာပါ။ pupil (အမဲရောင်အလုံး) ရဲ့ diameter ကတော့ 2mm ကနေ 8mm ထိရှိတတ်ပါတယ်။ iris ရဲ့မျက်နှာစာဘက်မှာ visible pigment ရှိပြီး နောက်ဘက်မှာတော့ black pigment ပါပါတယ်။
မျက်လုံးရဲ့အတွင်းအကျဆုံး membrane ကတော့ retina (မျက်ကြည်လွှာ)ပါ။ မျက်လုံးနဲ့ object တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါ အဲဒီ object ကလာတဲ့ အလင်းတန်းဟာ retina ပေါ်မှာပုံရိပ်ထင်ပါတယ်။ retina ရဲ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ discrete light receptor တွေပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ receptor ၂မျိုးရှိပါတယ်။ cones နဲ့ rods ပါ။ မျက်လုံးတစ်လုံးမှာ cone ပေါင်း six million ကနေ seven million ထိရှိတတ်ပါတယ်။
cone တွေဟာ retina ရဲ့ central protion (fovea) မှာပြန့်နှံ့ပြီးရှိနေပါတယ်။ သူက color ကို sensitive ဖြစ်ပါတယ်။ cone တွေကြောင့်သာ အသေးစိတ် အနုစိတ်ကြည့်မြင်နိုင်ကြတာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ cone တစ်ခုချင်းစီဟာ nerve ကြောတစ်ခုစီနဲ့ချိတ်ဆက်ထားလို့ပါ။ ကိုယ်မြင်ချင်တဲ့ object တစ်ခုရဲ့ image ကို fovea မှာထင်လာစေဘို့အတွက် muscle တွေကိုသုံးပြီး eye ball ကို rotate လုပ်ပေးရပါတယ်။ (မျက်လုံးကစားတယ်ခေါ်မှာပေါ့။) cone vision ကို photopic or bright-light vision လို့ခေါ်ပါတယ်။
Rod ရဲ့အရေအတွက်ကတော့ cone ထက်ပိုများပါတယ်။ 75 to 150 million လောက်ရှိပါတယ်။ cone လိုဘဲ retina ရဲ့မျက်နှာပြင်မှာပြန့်နှံ့ပြီးရှိနေတာပါ။ rod တွေကအရေအတွက်များတော့ သူပြန့်နှံ့နေတဲ့ area ကလည်းကျယ်ပြန့်တာပေါ့။ ပြီးတော့ rods အတော်များများဟာ nerve ကြောတစ်ခုထဲကိုဘဲစုပြုံချိတ်ဆက်ထား ကြပါတယ်။ ဒီအကြောင်း ၂ခုကြောင့် ဒီ rod (receptor) တွေက အသေးစိတ် အနုစိတ် ခွဲခြားနိုင်စွမ်းကိုလျော့ကျစေပါတယ်။ ဆိုလိုတာက rod တွေဟာ overall picture လောက်သာပေးနိုင်ပါတယ်။ color vision အတွက်လည်း rod ကလုပ်မပေးနိုင်ပါဘူး။ low level illumination တွေကိုသာ sensitive ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ နေ့အလင်းရောင်မှာ အရောက်တောက်တောက်ပပ မြင်ရတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုကို လရောင်အောက်မှာ ကြည့်တဲ့အခါ colorless ဖြစ်နေတာတွေ့ရပါမယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ လရောင်အောက်မှာဆိုရင် rod တွေသာ stimulate ဖြစ်လို့ပါ။ rod တွေက color ကို sensitive မဖြစ်ဘူးလေ။ ဒါကို scotopic or dim-light vision လို့ခေါ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ ကိုယ့်မျက်စိတည့်တည့်မှာရှိနေတဲ့ object တွေကိုအသေးစိတ်၊ အနုစိတ်မြင်နိုင်ပါတယ်။ object ဘေးကအရာတွေကိုတော့ အသေးစိတ်မမြင်နိုင်ဘဲ pattern တခုအဖြစ်သာမြင်ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းလက်တွေ့သိနိုင်ပါတယ်။
Len (မှန်ဘီလူး) တွေကိုတော့ fibrous cell တွေနဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဒီ len ကို ciliary body မှာချိတ်ဆွဲထားပါတယ်။ အမျှင်တွေနဲ့ချိတ်ဆွဲထားတာပေါ့။ len မှာ ရေဓါတ် 60-70 %, အဆီ 6% လောက်ပါဝင်ပါတယ်။ မျက်လုံးထဲကအခြား tissue တွေနဲ့စာရင် protein ဓါတ်အများဆုံးပါဝင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပေါ့။ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ len တွေဟာ နဲနဲ ၀ါလာတတ်ပါတယ်။ len ဟာ visible light spectrum ရဲ့ 8% လောက်ကို absorb လုပ်နိုင်ပါတယ်။ wavelength တိုရင် ပိုပြီး absorb လုပ်နိုင်ပါတယ်။ len အတွင်းက protein တွေဟာ infrared ရော ultraviolet light တွေကိုပါ absorb လုပ်ပါတယ်။ ဒီလိုရောင်ခြည်တွေအများကြီးကြည့်မိရင်တော့ မျက်လုံးပျက်နိုင်ပါတယ်။
2.1.2 Image Formation in the Eye
မျက်လုံးထဲမှာ ပုံရိပ်တစ်ခုဘယ်လိုထင်လာသလဲဆိုတာ ကြည့်ရအောင်။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်အရဆိုရင်တော့ ရူပါရုံ နဲ့ စက္ခုပသာဒအကြည်ဓါတ် တို့ထိတွေ့မှုကြောင့် မြင်သိစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အခု Image formation in the eye ဆိုတာကိုဖတ်ပြီးရင်တော့ လက်တွေ့သိနိုင်ပါပြီ။
လူ့မျက်လုံးထဲမှာပါတဲ့ len နဲ့ အပြင်မှာအသုံးပြုနေကြတဲ့ len ကြားခြားနားချက်တစ်ခုကတော့ လူ့မျက်လုံးထဲက len က flexible ဖြစ်တာပေါ့။ အပြင်က len ကို သွားကွေးလိုက်လို့ကတော့ ကွဲသွားမှာပေါ့။ Figure 2.1 မှာပြထားတဲ့အတိုင်း len ရဲ့အတွင်းမျက်နှာပြင်က အပြင်မျက်နှာပြင်ထက်ပိုခုံးနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရမယ်။ len ရဲ့ ပုံသဏ္ဍန်ကိုတော့ ciliary body မှာရှိတဲ့အမျှင်တွေက control လုပ်ပေးတယ်။ အဝေးကပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ချင်ရင် muscle တွေကနေ len ကိုပြားသွားစေတယ်။ အနီးအနားက ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ဘို့ဆိုရင်တော့ ခုံးသွားစေတယ်။ (မျက်လုံးကိုပြူးလိုက်ရင် len ကပြားသွားတယ်။ ကြုံ့လိုက်တော့ ခုံးသွားတယ်။) အနီးမှုံတဲ့သူတွေဆိုသိသာတယ်။ အနီးက object တွေကိုကြည့်တဲ့အခါ (မျက်မှန်မပါဘဲစာဖတ်တဲ့အခါနဲ့အပ်ပေါက်ထိုးတဲ့အခါတွေမှာ) မျက်လုံးကိုကြုံ့ပြီး ကြည့်လေ့ရှိတယ်။ ကိုယ်ကအနီးမှုန်သူမို့လက်တွေ့စမ်းကြည့်တယ်။ စာဖတ်တဲ့အခါ ခပ်ဝါးဝါးဖြစ်နေရင် မျက်လုံးကိုကြုံ့ပြီးကြည့်တဲ့အခါ ပိုထင်ရှားလာတာတွေ့ရတယ်။ အဝေးကိုပြူးကြည့်ရင်ပိုမြင်ရသလားဆိုတာကတော့အဝေးမှုံသမားတွေစမ်းကြည့်ကြပေါ့။
Len ရဲ့ focal center နဲ့ retina ကြားအကွာအဝေးကတော့ 14 mm ကနေ 17 mm လောက်ရှိမယ်။ မျက်လုံးက 3m ထက်ကျော်တဲ့အကွာအဝေးက object တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါ len ရဲ့ refractive power က lowest ဖြစ်ပြီး အရမ်းနီးတဲ့ object အတွက်ဆိုရင်တော့ refractive power က အရမ်း strong ဖြစ်တယ်။ ပြင်ပက object တစ်ခု retina ပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့အခါ retina image ရဲ့ size ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာတွက်နိုင်တယ်။ Figure 2.2 ကိုကြည့်ပါ။ လူတစ်ယောက်က 100 m အကွာမှာရှိတဲ့ 15 m မြင့်သော သစ်ပင်တစ်ပင်ကိုကြည့်တယ်ဆိုပါတော့။
အဲဒီသစ်ပင်ဟာ retina မှာ size ဘယ်လောက်နဲ့ပေါ်မလဲတွက်ကြည့်ရအောင်။ မသိကိန်းဖြစ်တဲ့ retina image ရဲ့ size ကို x mm လို့ထားရအောင်။
(15/100) = (x/17) ပေါ့။
ဒါဆိုရင် x = 2.55 mm
100 m အကွာမှာရှိတဲ့ 15 m မြင့်တဲ့သစ်ပင်ဟာ မျက်လုံးထဲမှာတော့ 2.55 mm သာရှိပါတော့တယ်။ အကွာအဝေးကို 1000 m လို့ထားကြည့်ပါ။ retina image ဟာ 0.255 mm ဖြစ်သွားပါမယ်။ ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် object တွေဟာ ဝေးသွားလေလေ retina image size ဟာ သေးသွားလေလေပေါ့။ အရမ်းဝေးသွားရင်တော့ မြင်ကိုမမြင်ရတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားပါတယ်။
အဲဒီ retina image ဟာ fovea မှာ လာပေါ်တာပါ။ မြင်သိမှုဘယ်လိုဖြစ်လာလည်းဆိုတော့ light receptors တွေရဲ့ excitation ကနေဖြစ်စေပါတယ်။ သူတို့က radiant energy ကနေ electrical impulse အဖြစ်ကိုပြောင်းပေးတာပါ။ ဒီ electrical impulse တွေကိုမှ brain ကနေပြီး decode ပြန်ုလုပ်ယူပါတယ်။ အဲဒီမှာ “မြင်တယ်” ဆိုတာဖြစ်လာတာဘဲ။
2.1.3 Brightness Adaptation and Discrimination
Digital image တွေကို display လုပ်တဲ့အခါ discrete set of brightness point တွေအဖြစ်နဲ့ပြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မျက်လုံးရဲ့ brightness level အမျိုးမျိုးကိုခွဲခြားနိုင်စွမ်းဟာ image processing result တွေကိုထုတ်တဲ့အခါမှာထည့်သွားစဉ်းစားရမယ့်အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Human visual system က adapt လုပ်နိုင်တဲ့ light intensity level ရဲ့ range ကအတော်လေးတော့များပါတယ်။ (scotopic (မှိန်) threshold ကနေ glare (စူးရှတောက်ပ) limit အထိ)
Subjective brightness (ဆိုလိုတာက Human visual system ကမြင်နိုင်တဲ့ brightness) ဆိုတာက မျက်လုံးကို ကျရောက်လာတဲ့ light intensity ရဲ့ logarithmic function တစ်ခုဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Figure 2.3 မှာကြည်ပါ။ ပုံက light intensity နဲ့ subjective brightness တို့ရဲ့ plot ပါ။ long solid curve က visual system က adapt လုပ်နိုင်တဲ့ intensity range ကိုပြတာပါ။ (scotopic threshold ကနေ glare limit အထိရှိပါတယ်။)
Digital image တွေကို display လုပ်တဲ့အခါ discrete set of brightness point (intensity) တွေအဖြစ်နဲ့ပြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မျက်လုံးရဲ့ brightness level အမျိုးမျိုးကိုခွဲခြားနိုင်စွမ်းဟာ image processing result တွေကိုထုတ်တဲ့အခါမှာထည့်သွားစဉ်းစားရမယ့်အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Human visual system က adapt လုပ်နိုင်တဲ့ light intensity level ရဲ့ range ကအတော်လေးတော့များပါတယ်။ light intensity level ပေါင်း 1010 လောက်ကို adapt လုပ်နိုင်တာပါ။ (scotopic (မှိန်) threshold ကနေ glare (စူးရှတောက်ပ) limit အထိ) ပုံမှာဆိုရင် -6 to4ပေါ့။
Subjective brightness ဆိုတာ မျက်လုံးကို ကျရောက်လာတဲ့ light intensity ရဲ့ logarithmic function တစ်ခုဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Figure 2.3 မှာကြည်ပါ။ ပုံက light intensity နဲ့ subjective brightness တို့ရဲ့ plot ပါ။ long solid curve က visual system က adapt လုပ်နိုင်တဲ့ intensity range ကိုပြတာပါ။ (scotopic threshold ကနေ glare limit အထိရှိပါတယ်။ -6 to 4) scotopic ကနေ photopic vision ကိုပြောင်းသွားတာက -3 ကနေ -1 ကြားမှာပါ။ ပုံမှာ first line and second line ကြားပေါ့။ photopic vision ချည်းသက်သက်ရဲ့ range ကတော့ 106 ရှိပါတယ် (ပုံမှာ second red line and third red line ကြား)။
Human visual system က အဲလောက်များပြားတဲ့ range ကိုတော့ တပြိုင်နက် operate မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ overall sensitivity ကို အပြောင်းအလည်းလုပ်ရပါတယ်။ အဲဒါကိုဘဲ brightness adaptation လို့ခေါ်တာပါ။ total adaptation range နဲ့နှိုင်းစာမယ်ဆိုရင် မျက်လုံးက တပြိုင်နက် discriminate (ခွဲခြားသိမြင်နိုင်စွမ်း) လုပ်နိုင်တဲ့ intensity level ကအတော်လေးနည်းပါတယ်။ human visual system ရဲ့ current sensitivity level ကို brightness-adaptation level လို့ခေါ်ပါတယ်။ ပုံမှာဆိုရင် Ba ဆိုတဲ့ point မှာရှိတဲ့ brightness-adaptation level က (Bb to Ba) ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်လုံးရဲ့ contrast sensitivity ကို တိုင်းတာဘို့အတွက် Brightness B ရှိတဲ့ မျက်နှာပြင်တစ်ခုရဲ့အလယ်မှာ brightness (I + I) ရှိတဲ့ စက်ဝိုင်းတစ်ခုကိုဆွဲပြီး ကြည့်ခိုင်းရအောင်။ I တန်ဘိုးကို0ကနေစပြီး စက်ဝိုင်းလေးကိုမြင်လောက်တဲ့အထိ တိုးသွားရအောင်။ မြင်သာတဲ့အထိဘဲပေါ့။ I/I ကို Weber ratio လို့ခေါ်ပါတယ်။ I/I က 2% လောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုတာက background ရဲ့ brightness 100 ဖြစ်ပြီးသူ့ပေါ်ကစက်ဝိုင်းရဲ့ brightness က2လောက်ဆိုရင် လူက အဲဒီစက်ဝိုင်းကိုမြင်ပါပြီ။ စက်ဝိုင်းကို background ကနေခွဲပြီးမြင်နိုင်ပြီပေါ့။
တကယ်လို့ I/I ရဲ့တန်ဘိုးက နည်းတယ်ဆိုရင် intensity နည်းနည်းလေးပြောင်းသွားတာကိုတောင် သိနိုင်တယ်။ ခွဲခြားနိုင်တယ်။ brightness discrimination ကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ I/I ရဲ့တန်ဘိုးများရင်တော့ poor brightness discrimination လို့သတ်မှတ်ရမှာပေါ့။ average ကတော့2လောက်ရှိကြပါတယ်။ ဒါက မျက်လုံးနဲ့ချည်းဆိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ background illumination နဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်။ background က low level illumination ဖြစ်ရင် brightness discrimination မကောင်းဘူး။ higher level illumination background ဆိုရင်တော့ brightness discrimination ပိုကောင်းလာပါတယ်။
Figure 2.4 က constant brightness background အတွက်ဖြစ်ပြီး Figure 2.5 မှာတော့ background ရဲ့ brightness ကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတွက်ထားတဲ့ contrast sensitivity ကိုပြထားပါတယ်။ Figure 2.5 ကိုတော့ စာအုပ်ထဲသာပြန်ကြည့်ကြပါတော့။
Figure 2.6 (a) မှာပြထားတဲ့ပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် (ပုံကိုစာအုပ်ထဲကဘဲကြည့်ပါတော့) intensity value ကိုတဖြည်းဖြည်းမသိမသာတိုးထားတဲ့ပုံပါ။ ဘယ်ကနေညာကိုတိုးထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် မျက်လုံးကဒါကို ဘယ်နေရာမှာအပြောင်းအလည်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ ခွဲခြားပြီးသိနိုင်ပါတယ်။ B နဲ့အမှတ်အသားပြထားတဲ့နေရာမှာ Brighter stripe ကိုမြင်ပြီး D နဲ့ပြထားတဲ့နေရာမှာ Darker stripe ကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ stripe တွေကို Mach Bands လို့ခေါ်တာပါ။ 1865 မှာ ဒါကိုစပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ Ernst Mach ရဲ့အမည်ကိုပေးထားတာပါ။ Figure 2.6 မှာတော့ band တွေအများကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
Figure 2.6 (b)
2.2 An Image Model
Image ကို f(x,y) ဆိုတဲ့ two-dimensional light intensity function နဲ့ဖော်ပြတယ်ဆိုတာပြောပြပြီးပါပြီ။ spatial coordinates (x,y) မှာရှိတဲ့fရဲ့ value or amplitude ဆိုတာဟာ အဲဒီ point မှာရှိတဲ့ image ရဲ့ brightness or intensity ကိုပြောတာပါ။ light ဆိုတာ energy တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် f(x,y) ဟာ nonzero ဖြစ်ရမယ်။ finite ဖြစ်ရပါမယ်။
Image ကို object တွေကနေ ပြန်လာတဲ့ အလင်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ f(x,y) မှာ component ၂ခုပါဝင်ပါတယ်။ object ပေါ်ကျရောက်တဲ့အလင်းရဲ့ ပမာဏ (illumination) ရယ် အဲဒီ object ကပြန်လာတဲ့ အလင်း (reflectance) ရယ်ပေါ့။ illumination ကို i(x,y), reflectance ကို r(x,y) လို့သတ်မှတ်တယ်။ ဒါကြောင့် f(x,y) ဆိုတာဟာ
where 0<i(x,y)<∞ (2.2.3) and
reflectance ဟာ0နဲ့ 1 ကြားရှိပြီး total absorption ဆိုရင်0ပေါ့။ ဆိုလိုတာက object ပေါ်အလင်းကျရောက်ပြီး လုံးဝအလင်းမပြန်တဲ့ object မျိုးဆို r(x,y)=0 ပေါ့။ အလင်းအရမ်းပြန်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ r(x,y)=1 ပေါ့။ မှန်လိုဟာမျိုးဆိုသစ်သားထက် အလင်းပြန်တာများတာပေါ့။ အမဲရောင် ကတ္တီပါစရဲ့ reflectance r(x,y) ဟာ 0.01 လောက်ဖြစ်ပါတယ်။ steel အတွက်ကတော့ 0.65, အဖြူရောင်နံရံဆိုရင် 0.8, ငွေသတ္တုပြားကတော့ 0.9, snow ကတော့ 0.93 ပါ။ ဒါကြောင့် အမဲရောင်ပစ္စည်းတွေကရှာရခက်ပြီး အရောင်တောက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကရှာရလွယ်ပါတယ်။ reflectance များလို့ပါ။
i(x,y) ကိုတော့ object တွေရဲ့ characteristics နဲ့သတ်မှတ်ပါတယ်။ နေသာတဲ့နေ့မျိုးမှာဆိုရင် နေကထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ illumination ဟာ 9000 foot-candles သာသာရှိပါတယ်။ တိမ်ထူတဲ့နေ့တွေမှာဆိုရင်တော့ 1000 foot-candles လောက်ထိလျော့သွားတတ်ပါတယ်။ တိမ်ကင်းစင်တဲ့ လပြည့်ညတွေမှာဆိုရင်တော့ illumination ဟာ 100 foot-candles လောက်ရှိပါတယ်။
Coordinate (x,y) မှာရှိတဲ့ monochrome imagefရဲ့ intensity ကို အဲဒီ point မှာရှိတဲ့ image ရဲ့ light ရဲ့ gray level (l) လို့ခေါ်ကြရအောင်။ l ရဲ့ value ဟာ
L­min ≤ l ≤ Lmax (2.2.5)
သီိအိုရီအရဆိုရင် L­min ရဲ့ တန်ဘိုးဟာ positive ဘဲဖြစ်ရမယ်။ Lmax ကလည်း finite ဖြစ်ရပါမယ်။ လက်တွေ့မှာတော့
Lmin = imin rmin
Lmax = imax rmax
Indoor image processing application တွေအတွက်ဆိုရင် Lmin ≈ 0.005 ဖြစ်ပြီး Lmax ≈ 100 လောက်ရှိပါမယ်။ L­min နဲ့ Lmax ကြားက interval ကိုတော့ gray scale လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီ interval ကို interval [0,L] အဖြစ် ပြောင်းပြီးသုံးလေ့ရှိပါတယ်။ အမဲရောင်အတွက်ဆို l =0ပေါ့။ l = L ဆိုရင်တော့ အဖြူရောင်ပေါ့။ ကြားက တန်ဘိုးတွေကတော့ black နဲ့ white ကြားက shaded gray တွေပေါ့။
Posted by Htar Htar Lwin at 4:13 AM
Htar Htar Lwin December 30, 2012 at 10:46 AM
အသုံးမကျတဲ့နိုင်ငံမှာနေရတဲ့အတွက်ထပ်ရေးထားတဲ့အပိုင်းလေးကိုဖြည့်စွက်ပြီး တင်တာ အကြိမ်ကြိမ်ကျိုးစားသော်လည်းမရလို့ လက်လျှော့လိုက်ပါတယ်။ ဖိုင်ကိုသာဒေါင်းပြီးကြည့်ကြပါ။ ဖိုင်ထဲမှာတော့ ပြည့်စုံပါတယ်။